ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီတည်ထောင်သူ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း - Yangon Media Group
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီတည်ထောင်သူ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ယခင်တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်တွင် အကြီးအကဲတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ကာ ယခုအာဏာရ အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီလက်ထက်တွင်လည်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့ လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ယူနေရသူ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ အလွန်ခင်မင်ရင်းနှီးသူဟူ၍ သတင်းကြီးနေသူ သူရဦး ရွှေမန်းသည် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်က ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဟူသောအမည်ဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့သည်။ ယင်း နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အတွက် ပါတီတည်ထောင်သည်၊ မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ရပ်တည်သွားမည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီတည်ထောင်သူ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်များကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြ အပ်ပါသည်။
ယခင်နေ့မှ အင်တာဗျူး အပိုင်း (၁) ကို ဖတ်ရှုရန် ====> http://bit.ly/2SnWpLg
မေး- ဥက္ကဋ္ဌကြီးက ပါတီထူထောင်ဖို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို အဆိုပြုလိုက်တဲ့နေ့မှာပဲ ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက် နှာမှာ ပြည်သူများသို့ တင်ပြချက်ဆိုပြီး အချက်ငါးချက်ပါတဲ့ တင်ပြ ချက်တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲတာက ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေဖြစ်မလား။ အဲတော့ အဲဒီ အချက်ငါးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ခြုံငုံပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ။
ဖြေ- ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ဒီအချက် ငါးချက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ကိစ္စကလည်း ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေ တဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ အမျိုးသားသင့်မြတ်ရေး စတဲ့အချက်တွေ ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ကျွန်တော်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီး အဲဒီ အချက်ငါးချက်ကို ကျွန်တော်တို့ အလေးထားဆောင် ရွက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၊ ကျွန်တော်တို့ ပြည် ထောင်စုဟာ ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ရရှိနိုင်မယ်လို့ လေးလေးနက်နက်ယုံကြည်တဲ့အတွက်၊ ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက် ဒီအကြောင်းအရာကို အလေးထားပြီးတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်း အရာတစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်းမှာလည်း အင်မတန်အဓိ ပ္ပာယ်ပြည့်စုံပါတယ်။ ကျစ်လျစ်ပါတယ်။ နက်နဲပါ တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို အခုမှာ ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲ ဆွေးနွေးပါရစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေး- နောက်တစ်ခုက ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာ မျက်နှာကနေပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ရပ်တည်ချက်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အတွေး အခေါ်တွေအကုန်လုံးကို တင်ပြသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော် တို့ စိတ်ဝင်စားသွားတာတစ်ချက်က ဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောတဲ့အထဲမှာ မြန်မာ နိုင်ငံနဲ့ဆီလျော်လိုက်ဖက်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဖြစ်ပေါ်လာရေး ဆိုတာတွေ့ပါတယ်။ အဲဒီစကားလုံးမှာ ဆီလျော်လိုက်ဖက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဥက္ကဋ္ဌကြီးက အထူးပြုပြီးတော့ သုံးထားတာတွေ့ပါတယ် ခင်ဗျ။ အဲဒီဟာ ဘာကိုဆိုလိုတာပါသလဲခင်ဗျ။
ဖြေ- ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ တချို့တချို့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေထဲမှာ၊ တချို့တချို့ နိုင်ငံရေး ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေထဲမှာ၊ တချို့သော သူများက ဒီမိုကရေစီဆိုလို့ရှိရင်လည်း သူများနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီမျိုးကို ဇောင်းပေးပြီးပြောဆို ဆွေးနွေးတာ တွေရှိပါတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်လည်း သူများနိုင်ငံတွေမှာဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေတချို့က အဲဒီဘက် အားသန်ပြောနေတာ တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီ ဒီမိုကရေစီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီဖွဲ့စည်း ပုံအခြေခံဥပဒေပဲဖြစ်ဖြစ် သို့မဟုတ်ရင် ဖက်ဒရယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့နိုင်ငံသူ့အခြေအနေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဆွဲပြီးလုပ်နိုင်မှပဲ သူ့နိုင်ငံအတွက် အဆင်ပြေမယ်။ အဲဒီ နိုင်ငံအတွက် တိုးတက်မယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ထူထောင်ချင်တယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ ဆီလျော်ရမယ်။ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံနဲ့ လိုက်ဖက်ရမယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြော ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူး၊ မဆီလျော် ဘူးဆိုရင် လက်တွေ့မကျနိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ တိုးတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်က များစွာအ ခက်အခဲဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဟာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ၊ အထူးသဖြင့်တော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆီလျော် လိုက်ဖက်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုဖြစ်မှသာ လျှင် ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုလည်း ကောင်းကျိုး ချမ်းသာတွေရမှာဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်ဒီလိုတင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေး- အဲဒီတော့ ဥက္ကဋ္ဌကြီးဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ကျွန်တော်ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခု ဟာ လုံးဝဥဿုံ ကော်ပီပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ ကူးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆလားခင်ဗျ။
ဖြေ- မှန်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပါအဝင် ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတည်ဆောက်တဲ့ကိစ္စ အပါအဝင် ကျန်တဲ့ မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို လုံးဝဥဿုံ ကော်ပီယူမယ်ဆို ရင်တော့ အမှားတွေတွေ့လိမ့်မယ်။ ဒုက္ခတွေများများ ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။
မေး- နောက်တစ်ခုကတော့ လက်ရှိမှာ ဥက္ကဋ္ဌကြီးက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံး သပ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူထားတယ်။ အခုတည်ထောင်မယ် ဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ဆိုတဲ့ ပါတီမှာလည်း အဲဒီကော် မရှင်က အဖွဲ့ဝင်တချို့ကလည်း ကနဦးတည် ထောင်သူတွေထဲမှာလည်း ပါနေတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီကော်မရှင်ရဲအနာဂတ်က ဘယ်လိုဖြစ်သွား နိုင်ပါသလဲခင်ဗျ။ အဲဒီကော်မရှင်က ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်လက်ရပ်တည် နေဦးမှာပါလားခင်ဗျ။
ဖြေ- ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ရဲ့အဆုံးအဖြတ်နဲ့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းဖို့ ကိစ္စမှာ ဒီနေ့လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ သဘောထားဆန္ဒ နဲ့ သူ့ရဲ့သဘောတူညီချက်အရ ထိုနည်းတူစွာပဲ ကျွန်တော် ရဲ့သဘောထားဆန္ဒနဲ့ သဘောတူညီချက်အရ ဒီကော် မရှင် ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ရှေ့မည်သို့ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ် မှုမှာတည်တယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။
မေး- အဲတော့ ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျ၊ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မှုပေါ်တည်တယ်ဆို တော့ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မှုတွေ ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောလားခင်ဗျ။
ဖြေ- ဆိုတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့ ဆွေး နွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းမရှိပါဘူး။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် ဘာမှညှိနှိုင်းတာလည်း မရှိ ဘူး။ စပြီးတော့ ဒီကော်မရှင်မှာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန် ယူဖို့ ကျွန်တော့်ဆီကို ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်က ဒီအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ အကြောင်း အရာသုံးခု သဘောတူပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ဒီမှာ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူမယ်ဆိုပြီး ဇာတ် လမ်းက အဲလိုစလာတာ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီဇာတ်လမ်း အစအဆုံးဟာလည်း ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရဲ့ သဘော တူညီချက်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကော် မရှင်မှာ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော် တို့ကတော့ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားအ တွက် အဓိကထားပြီးတော့ ရောက်တဲ့နေရာ၊ ရတဲ့နေ ရာနဲ့ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး- ခုနဥက္ကဋ္ဌကြီး အချက်သုံးချက်ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတော် ၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့။ အဲဒီအချက်သုံးချက်က ဘာတွေလည်းခင်ဗျ။
ဖြေ- နံပါတ် (၁) ကတော့ ကျွန်တော့်ကို ဒီကော်မရှင်မှာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ပေးမယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်က ချီး မြှင့်တဲ့စရိတ်နဲ့ အဆောင်အယောင်နဲ့ သို့မဟုတ်ရင် နိုင်ငံတော်ကချီးမြှင့်တဲ့စရိတ်နဲ့ အဆောင်အယောင်များ ချီးမြှင့်ငွေများ ကျွန်တော်မယူလိုပါဘူး။ (၂) က အကယ် လို့ ကျွန်တော့်ကို ဒီတာဝန်ပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် တင်ပြတဲ့သူတွေကို ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ခန့် အပ်ပေးပါ။ (၃) ဒါတင်မကသေးဘူး ဒီကော်မရှင်မှာ ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ တင်ပြတဲ့သူတွေ မကသေးဘဲနဲ့ြီူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ကိုယ်စားလှယ်များ ပေးပါ။ အဲလို အချက်သုံးချက်ကို လက်ခံမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လည်း ဒီတာဝန်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုပြီး ကျွန် တော်ဒီလို အစပြုခဲ့ပါတယ်။
မေး- ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ ဥက္ကဋ္ဌကြီးက တပ်မတော်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်း ဆောင်တွေထဲမှာလည်း တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ အရပ်သားအစိုးရကိုလည်း တာဝန်ယူတဲ့အခါမှာလည်း ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာကတည်းက ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတယ်။ အခု အထူး ကော်မရှင်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့ တောက်လျှောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ် မှာ အဆက်မပြတ်ဘဲနဲ့ ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးအနေနဲ့ ဒါထူးခြားပါတယ် ခင်ဗျ။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပေါ်မှာ ဥက္ကဋ္ဌကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါ သလဲ။ နောက်တစ်ချက်က ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီရော ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဘယ်လိုမူဝါဒ နဲ့ ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မလဲခင်မျ။
ဖြေ- ဟုတ်ကဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ အယူအဆကိုပြောမယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စများဟာ ယနေ့အာဏာရပါတီ လက် ရှိအစိုးရရဲ့ မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာပဲ အားလုံးအခြေ ပြုတော့ အဲဒီအခါမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဟာ လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို ရည်ရွယ်ချက်ပေါ် မူတည် ပြီးတော့ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဆောင် ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီနေ့တင်မဟုတ် ပါဘူး။ နောင်ကာလမှာလည်း အာဏာရပါတီတစ်ခု ရဲ့ အစိုးရရဲ့မူဝါဒအပေါ်မှာ လုပ်ရမယ်လို့ပဲ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ အာဏာရပါတီ အာဏာ ရအစိုးရဆိုတာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ကိစ္စအဝဝကို အားလုံး တာဝန်ရှိပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတင်မကဘူး။ နိုင်ငံ သားများရဲ့ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ပြီးတဲ့အခါမှာ တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး အဲဒီအစိုးရမှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလည်း အာဏာ ရပါတီရဲ့ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ်ရင် ညွှန်ကြား ချက်တွေဟာ သိပ်ပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလောက် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်အဖြေ လက်ခံမယ်လို့ ထင်ပါ တယ်။
လက်ရှိကျောင်းကားဆွဲနေသည့် ညာမောင်းယာဉ်များကို နောက်သုံးနှစ်ခန့်အထိ ပြေးဆွဲခွင့်ပြုရန်ေ??
ရေတိုစီမံကိန်းကြောင့် ချဲလ်ဆီးနည်းပြရာထူးကိုရွေးချယ်မည်မဟုတ်ဟု ဂွါဒီယိုလာဆို ၊ စည်းမျဉ်?
ကျောက်ဖြူ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း ကုန်ကျစရိတ် ကန်ဒေါ်လာ ခုနစ် ဘီလီယံခွဲမှာ အလွန်များပြီး ယု?
မန္တလေးတွင် ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်၍ တရားဥပဒေနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကူအညီတောင်းခံနိုင်
မန္တလေး ကျုံးဘေး လူထုနေရာတွင် ရေဘေးသင့် ဒေသများ ကူညီရန် ပန်းချီဆရာများ စုပေါ ပန်းချီရေးဆွဲေ
စီမံကိန်းများ အောင်မြင်ရန် ဗဟိုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များ၏ ချိတ်ဆက်မှု အားရှိသင့် သေ??
ဗြိတိသျှပါလီမန်က ဘရက်ဇစ် သဘောတူမှုကို ပယ်ချ